Argentina a chọrọ iji wụnye 4,000 TO 5,000 Kaadị ATMs ná mba - Blockchain News
Argentina ike adịghị anya a ndú na kaadị igwe ndọrọ ego ahịa. Dị ka obodo media, na mba nwere ike ịdị njikere inweta n'etiti 4,000 na 5,000 ATMs na akwado virtual ego.
Dị ka CEO na nchoputa nke Odyssey Group, Sebastian Ponceliz, na ATMs ga-bụghị naanị ga-eji ndị mmadụ wepụ ego kamakwa maka ijikwa virtual ego, site n'iji bi-directional Bitcoin ATMs.
"E nwere ihe m na-akpọ ego convergence na-eme ka anyị jiri dị iche iche nke n'aka ịkwụ ụgwọ na mgbanwe (ego, kaadị, e-wallets, iguzosi ike n'ihe ihe, wdg) na mmadụ na kọntaktị mgbe n'ihi na nke ahu bu ihe igwe ndọrọ ego na ike transact multiple ego, mbịne digital ego n'ime anụ ahụ na Anglịkan,"Na-akọwa Ponceliz.
Odyssey Group bụ otu n'ime ndị kasị ibu igwe ndọrọ ego na-egbo mkpa na United States, Mexico, Colombia na Spain.
The mkpebi e site na ụlọ ọrụ esisịt ini ke Argentinian ọchịchị kpebiri ịgbanwe ụkpụrụ na-ekwe ka onwe ụlọ ọrụ aka ATMs na ha na-echekwa na ụlọ ahịa.
Dị ka Mkpụrụ ego igwe ndọrọ ego Rada, ugbu a na e nweghị Bitcoin ATMs dị na Buenos Aires.
China na-aga gbochie ụmụ amaala si erekwa na mba ọzọ mgbanwe.
Nke a kọrọ site ...
Previous Post:Scientist.com ulo oru a blockchain dabeere data nkwenye n'elu ikpo okwu
Next Post:US omeiwu ịnụ ikpe n'ihi blockchain ọkọnọ yinye
Ka 8, 2018 na 12:31 AM
Ka 9, 2018 na 12:57 AM
Ka 20, 2018 na 12:27 AM
Ka 29, 2018 na 3:31 AM